Kukosha Kwekubatana Kwevashambadzi MuLockdown | Martech Zone
Kukosha Kwekubatana Kwevashambadzi MuLockdown
Chipiri, Gunyana 27, 2020 Chipiri, Gunyana 27, 2020 Tunio Zafer
Chidzidzo chevashambadziri uye maECOs pamusoro pezhizha chakawana kuti vashanu chete muzana havana kuwana zvakanakira hupenyu mukukiya - uye hapana kana munhu mumwe chete akati vakatadza kudzidza chinhu panguva iyoyo.
Uye neinoonekwa pent-up kudiwa kwekushambadzira zviitiko mushure mekuvhara kwegore, zvakangofananawo.
For xPlora, yekushambadzira uye yedhijitari inomiririra iri muSofia, Bulgaria, kugona kugovera dhizaini dhizaini uye zvimwe zvinhu zvinoonekwa nevashandi uye tarisiro yakaratidza kukosha.
Kuve dhijitari agency, yakachengeteka, uye 24/7 kuwana kune zvinoonekwa zvinhu kwakakosha kuchikwata chedu. pCloud inoenderana zvizere nechengetedzo zvinodiwa zvataita kuzadzisa zvinodiwa nevatengi vedu vemuno nevekunze kwenyika.
Georgi Malchev, xPlora Kutungamira Partner
Timu yeXPlora ikozvino inoshandisa pCloud, imwe yeEurope inokurumidza kukura gore kuchengetedza uye faira-kugovana mapuratifomu. Iine vatengi vepasi rese, kukiya kwakapa rimwe dambudziko.
Asi zvikwata zvekushambadzira zvinofanirwa sei kugoverana zvakakosha - uye kazhinji zvakakura - mafaera kuitira kuti ishande zvakanyanya pasirese umo Covid-19 inoramba ichiparadza? Pane mitemo mitatu yegoridhe yekuchengetedza kuenderera kwebhizinesi uchimbundira kure uye musanganiswa kushanda:
Kugara kwakabatana uye kushanda zvakabatana pamwe nevatinoshanda navo kubva kumba kunogona kuratidza kuti kwakaoma, uye zvinhu zvakamboreruka sekuratidzana magwaro ebasa, rakava basa rakaoma. Iko kugona kwekushanda pamwe chete pazvinyorwa, zvinoonekwa uye maodhiyo faira zviri nyore sezvaungaita mukati mehofisi nharaunda ndiyo kiyi yekubudirira.
Around 60% yeruzhinji rweBritain vanga vachishanda kubva kumba kubvira iko kukona kwekoronavirus, iine 26% ichifunga kuramba ichishanda kubva kumba pano neapo, kana zvangoita zvakachengeteka. Kunyangwe kana zvakajairika zvadzoreredza, pachave paine kudikanwa kwekugara wakabatana nevatinoshanda navo vasiri muhofisi nguva dzose uye vachisarudza kupota vachishanda kubva kumba. Izvo zvave kuve zvakakosha kuve nemabatirwo akanaka ekushandira pamwe pamunhu wese anokwanisa.
Tarisa pane File Chengetedzo
Izvo zvakakosha munguva dzakadai dzisina chokwadi zvekuti munhu wese anonzwa kunzwa kwekuchengetedzeka kana achishandira pazvinyorwa. Izvi zvinosanganisira kupa vatengi simbiso pamwe nevashandi. Chengetedzo-yegiredhi chete chengetedzo inobvumidza rugare rwechokwadi rwepfungwa uye kuvimbiswa, saka zvakakosha kuti varidzi vebhizinesi uye avo vari kukwikwidza matekinoroji matsva vaite basa ravo rechikoro. At pCloud, isu taida kuendawo nhanho yekuwedzera uye rega vashandisi vasarudze kuti vangade here kuchengetedza ruzivo rwavo mukati meEurope kana United States, tichivabvumira kuti vagadzirise panochengetwa mafaera avo zvichienderana nezvinodiwa nemunhu.
Kurerukirwa kwekushandisa pamwe ndiko kudiwa kukuru kune vanochengeta gore. Ndeapi mabhizinesi asingade ndeimwe yakaoma seti yemaitiro nemaitiro ekudzidza. Mhinduro inokodzera kune ese mahunyanzvi ndeye yakakosha kukosha.
Izvo zvinofungidzirwa kuti panopera 2020, 83% yemitoro yebasa ichave iri mugore, ichingoratidzira kukosha kwekugara wakabatana kana uchigovana mazano uye kugadzira nzira dzekushambadzira, uye kugadzira nzvimbo yekushandira pamwe. Kune vamiririri vekutengesa, Covid-19 yakapa mukana wekuwana akakodzera masisitimu nemaitiro ekusangana neiyo 'ramangwana rebasa'. Ndiwo mukana wavasingakwanise kupotsa.
Tags: kugovera fairakushandira pamwepcloudkubatana kurebasa riri kuresimba rekushanda riri kure
Tunio Zafer ndiye CEO we pCloud AG - iyo kambani inovandudza uye inopa pCloud yekuchengetedza chikuva. Ane makore anopfuura gumi nemasere ekutungamira uye ruzivo rwekushambadzira mumunda wehunyanzvi, uye akatora chikamu mune akati wandei akabudirira mapurojekiti ebhizinesi akadai seMTelekom, Host.bg, Grabo.bg, Mobile Innovations JSC nevamwe. Semutungamiri uye maneja wekambani yekuchengetedza gore, Tunio inosimudzira hunyanzvi munzvimbo dzakadai sedziviriro uye mutengo-unobudirira kupedzisa vashandisi. Tunio anokurudzira kufunga-mberi muboka rake rose, achishanda kuti aite zvakakosha pamusika weIT uri kukurumidza kukura, kune vanhu uye bhizinesi zvakafanana.